၁၈၈၄ ခုနှစ် ဂျူလိုင် ၁၂ ရက်နေ့ဖွား မိုဒီလျာနီရဲ့ ၁၃၂ နှစ်မြောက်မွေးနေ့ကို ကြိုဆို၍ ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် သမိုင်းထဲက လူသားများ သို့မဟုတ် ဘဝထဲကလူသားများ သို့မဟုတ် ပါရီမြို့ကို ဖြတ်သန်းသွားသူများ အမှတ်တရကဏ္ဍထဲမှာ မှတ်တမ်း တင်ရင်း ရေးသားလိုက်ရပါတယ်။
မိုဒီလျာနီ ရေးဆွဲပေးခဲ့တဲ့ အသည်းနှလုံး ယန်းဟေဗျူတန် (Photo Google + မရငတ)
အီတာလီယံ ပန်းချီကျော် မိုဒီလျာနီ ဆိုသူကိုတော့ ပန်းချီဝါသနာအိုးတိုင်း သိကြမှာပါ။
မောင်ရင်ငတေ ရေးချင်တာက လူသိများတဲ့ မိုဒီလျာနီရဲ့ကောက်ကြောင်းထက် အဲဒီ ပန်းချီမင်းသား အီတာလီယံ ဂျူးလေးနဲ့ သူ့ နောက်ဆုံးချစ်သူတို့ရဲ့ လွမ်းဖွယ်မောဖွယ် ဇာတ်ကြောင်းကိုသာပါ။
တကယ်တော့ သူတို့နှစ်ဦးရဲ့အချစ်အကြောင်း ရေးချင်ပေမယ့်လည်း မောင်ရင်ငတေ မရေးတတ်တဲ့ လိုင်းမို့လို့ မှတ်တမ်း သဘောအဖြစ်သာ ရေးလိုက်ရပါတယ်။
အီတလီယံပန်းချီမင်းသားလေး မိုဒီလျာနီရဲ့ Noix de Coco သို့မဟုတ် Haricot-Rouge သို့မဟုတ် Jeanne Hébuterne ယန်းဟေဗျူတန် (၁၈၉၈-၁၉၂၀) ကို ပါရီအရှေ့ပိုင်း Meaux မြို့လေးနားမှာ လူလတ်တန်းစား မိသားစုကနေ မွေးဖွားခဲ့ ပါတယ်။
ပန်းချီမင်းသားလေး Amedeo Modigliani အာမေဒဲရို မိုဒီလျာနီ (၁၈၈၄-၁၉၂၀) ကိုတော့ အီတလီပြည် အနောက်ခြမ်း မြေထဲပင်လယ်ကမ်းခြေက Livorno လီဗိုနိုမြို့ကလေးမှာ မွေးဖွားခဲ့တာပါ။
ပန်းချီဆရာမလေး ယန်းဟေဗျူတန် ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ မိုဒီလျာနီ (Photo Google + မရငတ)
အသက် ၁၄ နှစ်ကွာတဲ့ သူတို့ နှစ်ဦးရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းက သိပ်ပြီး ထူးခြားလှတယ် ပြောမရပါဘူး။ ပန်းချီကျောင်းဆင်းလာခါစ ပန်းချီကျောင်းသူတယောက်က ထူးခြားဆန်းသစ်တဲ့ ပန်းချီဆရာကျော်တယောက်ကို အရူးအမူး ကြိုက်နှစ်သက် စွဲလန်း ခဲ့ရာက စတင်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းတလမ်းမျှသာပါ။
မောင်ရင်ငတေတို့ ဟိုတခေတ်တခါတုန်းက စကားနဲ့ပြောရရင် အီတာလီဂျူးနွယ်ဖွားပီပီ ရုပ်ချောသူ မိုဒီလျာနီရဲ့ မြှာပွေ ဆော်ကြည် ဂေါ်စွန်ခဲ့တဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်း အကြမ်းအရမ်းတွေကြားက ဒီ ရင်ခုန်ချင်စရာ အချစ်ဇာတ်လမ်းတိုလေး ဇာတ် နာစွာနဲ့ ဇာတ်သိမ်းစောခဲ့ရတာတော့ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာပါ။
သူတို့နှစ်ဦး ဆုံတွေ့ လက်တွဲခဲ့ရတဲ့ ရက်ကာလတွေကတော့ သိပ်ကြာမြင့်လှတာ မဟုတ်ပါဘူး။
၁၉၁၇ ခုနှစ် နွေဦးပေါက်ရာသီရဲ့ ရက်တရက်မှာ သူတို့နှစ်ဦး စတင်တွေ့ဆုံခဲ့ကြတာပါ။ ၁၉၂၀ ခုနှစ် ဂျန်နဝါရီလ ၂၄ နဲ့ ၂၅ နေ့တွေမှာ တရက်သာခြားပြီး ကွယ်လွန်ခဲ့ကြတာမို့လို့ ရက်ပေါင်း တထောင် နီးပါးမျှသာ အတူတကွ နေထိုင်ခဲ့ရခြင်းပါ။
သူတို့ ကွယ်လွန်ခဲ့ရခြင်းကလည်း ဝမ်းနည်းကြေကွဲဖွယ်ရာပါ။
ငယ်စဉ်ခါကပင် အဆုတ်ရောဂါအခံရှိသူ မိုဒီလျာနီရဲ့ အနုပညာမာနကြီးမှု တဇောက်ကန်းနိုင်မှုတွေ အဆင်ခြင်မဲ့ သောက် စားနေထိုင်ခဲ့မှုတွေကြောင့် အသက်တိုခဲ့ရတာက ဘာမှမဆန်းကျယ်လှပါဘူး။ မိုဒီရဲ့ အနုပညာမာနနဲ့ အဲဒီခေတ် အခါက အနုပညာပွဲစားတွေရဲ့ အကြောမတည့်မှုကတော့ အဓိက တရားခံများ ဖြစ်ပါတယ်၊။ အနုပညာသစ်သမားတွေ နေရာမရတာ ကလည်း ခေတ်တိုင်းလိုလိုမှာပါ။
၁၉၁၈ ခုနှစ်တွင်း မိုဒီလျာနီရဲ့ ကျန်းမာရေးကို အကြောင်းပြုလို့ ပြင်သစ်တောင်ပိုင်း မြေထဲပင်လယ်ကမ်းခြေအနီးမှာ သူတို့ နှစ်ဦး သွားနေခဲ့ကြပါတယ်။ ပင်လယ်ရေ ပင်လယ်လေနဲ့ အနားယူရင်း သမီးတဦး မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။
နောက်တနှစ်မှာတော့ ပါရီမြို့ကို ရူးသွပ်သူ မိုဒီတယောက် သမီးနဲ့မိန်းမကို လက်ဆွဲပြီး မွန့်မတ်ထ် တောင်ကုန်းထိပ် ပြန် ရောက်လာပါတယ်။
မွေးရပ်မြေ အီတလီက မွန့်မတ်ထ် တောင်ကုန်းထိပ်ကို ရောက်လာခါစကလို ကတ္တီပါ ကုတ်အကျီနဲ့ သန့်ရှင်း သပ်ရပ် ချော မော လှပတဲ့ မင်းသားလေးလို ရုပ်ရည်မျိုး မဟုတ်တော့ပေမယ့် အတော်လေး ကြည့်ကောင်းနေပါတဲ့ ပန်းချီဆရာ ခလေး အဖေအဖြစ်နဲ့လို့ ဆိုကြပါတယ်။
မိုဒီလျာနီရဲ့ ဘဝတလျှောက် အသာယာဆုံးသောအချိန်က အဲဒီ မြေထဲပင်လယ်ကမ်းခြေကို ရောက်ခဲ့စဉ်ကလို့ ဆိုကြပါ တယ်။
၁၉၁၉ ခုနှစ်မေလမှာ သူတို့နှစ်ယောက် ပါရီပြန်ရောက်လာတော့ အမှတ် (၈) Rue de la Grande Chaumière မှာ နေ ထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။
အဲဒီအိမ်ခန်းက ပန်းချီဆရာ Paul Gauguin ၁၈၉၃-၉၄ ခုနှစ် များဆီက ခေတ္တခဏ နေထိုင်သွားခဲ့ဖူးတဲ့ အိမ်ခန်းပါ။ ဒါပေမယ့်လို့ အဲဒီတိုက်ခန်းမှာ သူတို့တတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဘာ အထိမ်းအမှတ် အမှတ်အသားမှ မရှိပါ ဘူးတဲ့။
ပါရီပြန်ရောက်လာတော့ ပန်းချီကားများစွာကို စိတ်ဝင်တစား သူရေးဆွဲခဲ့ပေမယ့် သူ့ရောဂါကတော့ သူ့ကို ဖိစီး နေခဲ့ပြီ ဖြစ် ပါတယ်။ ၁၉၂၀ ခုနှစ် ဂျန်နဝါရီလ ၂၄ ရက် နေ့မှာတော့ လူ့လောကထဲကနေ မိုဒီလျာနီ အပြီးအပိုင် ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။
နောက်တနေ့မှာတော့ တယောက်တည်း ကျန်ရစ်ခဲ့ရရှာသူ ယန်းဟေဗျူတန်လေးက သူမ နေနေတဲ့ ငါးထပ် အမြင့် တိုက်ခန်းရဲ့ ပြူတင်းပေါက်ကနေ ခုန်ချရင်းနဲ့ မိုဒီလျာနီနောက်ကို ကောက်ကောက်ပါ အောင် လိုက် သွားခဲ့ပါတော့တယ်။
သူမနဲ့အတူ ရှစ်လနီးပါးရှိပြီဖြစ်တဲ့ ဂျူနီယာမိုဒီ နံပတ်တူးကလေး လည်း သူမရဲ့ ဗိုက်ထဲမှာ ပါဝင်သွားခဲ့ ပါတယ်တဲ့။
မြေထဲပင်လယ် ကမ်းခြေမှာ မွေးဖွားခဲ့တဲ့ သူတို့ရဲ့ သမီးဦးကလေးကိုတော့ မိုဒီလျာနီရဲ့ အမတယောက်က လာရောက် ခေါ်ဆောင် မွေးစားခဲ့ပါတယ်။
သူတို့ ကွယ်လွန်ချိန်မှာတော့ မိုဒီလျာနီက အသက် ၃၅ နှစ် အရွယ်နဲ့ ယန်းဟေဗျူတန်ကတော့ ၂၁ နှစ်မျှသာ ရှိကြပါသေး တယ်။
အဲဒီလို ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ရူးရူးမိုက်မိုက် မထူးဆန်းလှပါတဲ့ ဇာတ်လမ်း တွေထဲမှာ မောင်ရင်ငတေလို အကောင်မျိုးတွေတောင် ပါဝင်ကပြခဲ့ဖူးလို့ သိပ်မအံသြပေမယ့် မိုဒီရဲ့ ပန်းချီတွေကိုတော့ မနှမျောဘဲနဲ့ မနေနိုင်ပါဘူး။ ပီကာဆိုကြီးလို အသက်ရှစ်ဆယ်ကိုးဆယ်ထိ မနေ ခဲ့ရရင်တောင်မှ နောက်ထပ် လေးငါးခြောက် နှစ်လောက် ဆက် နေစေချင်တဲ့ စိတ် ပေါ်ပေါက်မိလို့ပါ။
အဲဒီလို ပါရီ Montmartre မွန့်မတ်ထ်တောင်ကုန်း ပန်းချီရပ်ကွက်မှာ ၁၄ နှစ် ကျော်ကျော် နှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက် မက်မောလှစွာ နေထိုင်သွားခဲ့တဲ့ အီတာလီယံ ပန်းချီမင်းသားလေး အကြောင်းက အဆိုးအကောင်း သောင်းပြောင်း ရောနှောနေမှာပါ။
၁၉၀၆ ခုနှစ်မှာ မွန့်မတ်ထ်တောင်ကုန်းပေါ် မိုဒီလျာနီ ရောက်လာ ခဲ့တာပါ၊ အဲဒီချိန်ကစတင်လို့ တောင်ကုန်းပေါ်မှာ အိပ် တောင်ကုန်းပေါ်မှာ စား တောင်ကုန်းပေါ်မှာ သောက် … ရင်း မိုဒီလျာနီဟာ သူရေးချင်ရာ ပန်းချီကားများကို ရူးသွပ်မှုများစွာနဲ့ ရေးဆွဲခဲ့သူပါ။
သူရဲ့ သောက်သုံးမှုက ဒီကနေ့ထက်ထိတိုင် မွန့်မတ်ထ်တောင်ကုန်း ပန်းချီရပ်ကွက်မှာ စံချိန်ချိုး နိုင် တဲ့သူ မရှိပါဘူးထိ ပြောစမှတ် တွင်ခဲ့သူ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့။
အဲဒီ ပန်းချီမင်းသားလေးဟာ မွန့်မတ်ထ် တောင်ကုန်းပေါ်ကနေ စတင်လို့သောက်သွားခဲ့တာ Boulevard du Montparnasse ဘူးလ်ဗား ဒျူ မွန့်ပါးနပ်စ်လမ်းပေါ်က Rotonde ရိုတွန်ကဖေး၊ Saint-Germain-des- Prés ရပ်ကွက်က Café de Flore ရောက်သည်ထိတိုင် တဆိုင်ပြီးတဆိုင် ဝင်လိုက်ထွက်လိုက် မရပ်မနားသောက်တတ်သူပါလို့ နာမည်ကြီးခဲ့ပါတဲ့ အသောက် မင်းသားပါ။
သူ့ဘဝ နောက်ဆုံးနေ့များအထိလည်း အဆုတ်ရောဂါကြီး ရှိမှန်းသိခဲ့ပါလျှက် အကြိုက်သောက် သွားခဲ့သူ တဦးပါ။
အဲဒီခေတ်က နာမည်ကြီး ပီကာဆိုကတောင် အသောက်မှာကော ပန်းချီအရေးမှာကော လက်လန်ခဲ့ရသူ တဦးပါ။
မိုဒီလျာနီ အပါအဝင် ပန်းချီပန်းပု အနုပညာသမား အများအပြား နေထိုင်သွားခဲ့ကြဖူးတဲ့ မွန့်မတ်ထ် တောင်ကုန်း ပန်းချီ ရပ်ကွက်က နာမည်ကျော် Le Bateau-Lavoir ပန်းချီ ရိပ်သာပါ၊ ဒီကနေ့ထိတိုင် အနုပညာသစ်ဟောင်း လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ ရပ်တည်နေဆဲရှိတဲ့ နေရာတနေရာပါ။
တရုတ်ပြည်ရောက် Nu Couché (Red Nude or Reclining Nude) (Photo Google)
၂၀၁၅ ခုနှစ်က တရုတ်လူမျိုးဘီလျှံနာ Liu Yiqian ဆိုသူ ဒေါ်လာသန်း ၁၇၀ ကျော် ပေးဝယ်သွားခဲ့ ပါတဲ့ မိုဒီလျာနီရဲ့ နာမည်ကျော် ပန်းချီကားချပ် တချပ်ပါ။
မိုဒီလျာနီ ၁၉၁၇ ခုနှစ်က ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ ဝတ်လစ်စလစ်လဲလျောင်းသူ အမည်ရ အဲဒီ ပန်းချီကားချပ်ကို ပါရီ မွန့်မတ်ထ်တောင်ခြေ Pigalle ရပ်ကွက်ရှိ Galerie Berthe Weill ပြခန်းမှာ ချိတ်ဆွဲပြသဖို့ကို ပြင်ဆင်နေခိုက်မှာ တွေ့မြင်သွားခဲ့တဲ့ ပြင်သစ်မကြီးများက အမြင်မတော်ပါဘူးဟူ၍ ရဲခေါ်တိုင်တန်း လိုက်မှုကြောင့် တပြားတချပ်မှ မရခဲ့ပါဘဲ မိုဒီလျာနီတို့အုပ်စု ဂတ်တဲရောက်ခဲ့ရတဲ့ ပန်းချီကားချပ်ပါ။ အခုလို ဒီကနေ့အခါမှာ ဒေါ်လာသန်း ရာနဲ့ချီပြီး ရလိုက်မယ်ဆိုရင် မိုဒီတယောက် မွန့်မတ်ထ်ကနေမွန့်ပါနပ်တင်မက ရှန်ပိန်နယ်ထိ သော်လည်းကောင်း ကော့ညှက်နယ်ထိ သော်လည်းကောင်း လမ်းတ လျှောက် သောက်လို့ ကောင်းလိုက်မယ် ဖြစ်ခြင်းလား မိုဒီရေ ....
ဒါမှမဟုတ် အဲဒီ ဒေါ်လာအစိမ်းရွက်တွေကို မှုန့်မှုန့်ညက်ညက်ခြေလို့ ဒေါသတကြီးနဲ့များ အဲဒီတရုတ်ကြီး မျက်ခွက်ကို ခင်ဗျား ကောက်ပေါက်လေမလား မိုဒီ ရေ ... ခင်ဗျားအစား ရင်မောစွာ တွေးမိရခြင်းပါ ဗျာ၊
နှစ်တရာခန့် ကြာပြီးနောက် ဒေါ်လာသန်းရာနဲ့ချီပြီး တန်ခဲ့တဲ့ အဲဒီပန်းချီကားချပ်အကြောင်း ဘီဘီစီ ဖေ့ဘုတ်ခ် စာမျက်နှာ ပေါ်မှာ ပေါ်လာတော့ ဘာမသိညာမသိ ကိုယ်ရွှေကိုယ်မျိုးတွေရဲ့ ညစ်ညမ်းတဲ့ ကွန်မန့်တွေ ဖတ်မိခဲ့ရတော့ မိုဒီလျာနီရဲ့ ဒေါသမျက်နှာကြီးကို ပြေးမြင်မိရလိုက်ပါသေးတယ်။
တောင်းပန်ပါတယ် မိုဒီ .... ရေ . … ဒီဒို . .. …. ရေ …… ကိုယ်ရွှေကိုယ်မျိုးတွေအစား၊
နောက်ထပ် မိုဒီလျာနီအကြောင်း သောင်းပြောင်းထွေလာ သိချင်သေးရင်တော့ ပါရီသား ပန်းချီဆရာ စာရေးဆရာဂျာနယ်လစ် Michel Georges-Michel (၁၈၈၃-၁၉၈၅) ဆိုသူက သူတို့အကြောင်း စာတအုပ် ရေးသားခဲ့ပါတယ်၊
အဲဒီ စာအုပ် ..... Les Montparnos စာအုပ်ထဲမှာကတော့ မိုဒီလျာနီနဲ့ သူ့ရဲ့ ယန်းဟေဗျူတန်တို့ကို (Modrulleau et Haricot-Rouge) အဖြစ်တင်စား ဇာတ်ကောင်ထားပြီး ၁၉၂၄ ခုနှစ်မှာ ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့တာပါ။
၁၉၅၈ ခုနှစ်မှာတော့ အဲဒီစာအုပ်ကနေ Les Amants de Montparnasse (Montparnasse 19) ဆိုပြီး ပန်းချီမင်းသားလေး သို့တည်းမဟုတ် အသောက်သမားလေး မိုဒီလျာနီနဲ့ သူချစ်သူတို့ရဲ့ နောက်ဆုံး နေ့ရက်များအကြောင်း မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ သမိုင်းနောက်ခံ ဖြစ်ရပ်မှန် ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကား ပေါ်ထွက် လာခဲ့ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်နွယ်ဖွား ပါရီမြို့သား ဒါရိုက်တာ Jacques Becker ရိုက်ကူးပြီး ချက်နွယ်ဖွား ပြင်သစ်လူမျိုး ကန်းမြို့သား Gérard Philipe က မိုဒီလျာနီ နေရာက သရုပ်ဆောင်ပြီး ဂျာမန်နိုင်ငံသူ ပိုလန်မလေး Lilli Palmer က ယန်းဟေဗျူတန်အဖြစ် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်၊
ထုံးစံအတိုင်း ဒီကားကတော့ မပေါက်ခဲ့ပေမယ့် ဘဝထဲကလူသားတွေရဲ့ဇာတ်ကြောင်းကို စိတ်ဝင်စားတတ်တဲ့ မောင်ရင်ငတေက မရမက ရှာဖွေ ကြည့်ရှုခဲ့မိရပါတယ်၊
၁၉၅၈ ခုနှစ်ကရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ မိုဒီလျာနီနဲ့ ယန်းဟေဗျူတန်တို့အကြောင်းဇာတ်ကား
Les Amants de Montparnasse (Montparnasse 19) http://papystreaming.org/movie/montparnasse-19/
မိုဒီလျာနီနဲ့ ယန်းဟေဗျူတန်တို့ရဲ့သမီး အီတလီဘာသာစကားနဲ့ ကိုယ်တိုင်ရေးသားတဲ့ သူ့အဖေနဲ့ သူ့အမေအကြောင်း အင်္ဂလိပ် ဘာသာပြန် စာအုပ်ပါ။
Man and Myth by Jeanne Modigliani
Amedeo Modigliani Paintings (Over 500 pictures of his work)
မိုဒီလျာနီရဲ့ မိတ်ဆွေကြီး ဂျူးနွယ်ဖွားပိုလန်သားကြီး Léopold Zborowski လီယိုပို ဇာဘိုရောစကီး (၁၈၈၉-၁၉၃၂) ရဲ့ စတင် မြေတောင်မြှောက် ပေးခဲ့မှုကြောင့် ကျော်ကြားလာတဲ့ မိုဒီလျာနီရဲ့ ပန်းချီ ကားများ အကြောင်းကိုတော့ နောက် အလျှင်းသင့်ပါက ရေးပါဦးမည်၊ နားလည်သလောက်ပေ့ါ၊
၁၈၈၄ ခုနှစ် ဂျူလိုင် ၁၂ ရက်နေ့ဖွား မိုဒီလျာနီရဲ့ ၁၃၂ နှစ်မြောက် မွေးနေ့ကို ကြိုဆို၍ ဂုဏ်ပြုသော အားဖြင့် ဘဝထဲကလူ သားများ သို့မဟုတ် ပါရီမြို့ကို ဖြတ်သန်းသွားသူများ အမှတ်တရကဏ္ဍထဲမှာ မှတ်တမ်းတင်ရင်း ရေးသားလိုက်ရပါတယ်၊
ပါရီမြို့ရဲ့ တခုသော လေထန်ကုန်း ရိုတွန်ကဖေးရှေ့ရောက် မိုဒီနဲ့ သူ့ ချစ်သောဘော်ဒါကြီးများ
Modigliani, Picasso and André Salmon, Café de la Rotonde,
Image taken by Jean Cocteau in Montparnasse, Paris in 1916.
Amedeo Modigliani (1884-1920) Peintre Figuratif et Sculpteur Italien.
Pablo Picasso (1881-1973) Peintre, Dessinateur et Sculpteur Espagnol.
André Salmon (1181-1969) Poète, Romancier, Journaliste, Critique d'Artet Écrivain Français.
Jean Cocteau (1889-1963) Poète, Graphiste, Dessinateur, Dramaturgeet Cinéaste Français.
၁၈၈၄ ခုနှစ် ဂျူလိုင် ၁၂ ရက်နေ့ဖွား မိုဒီလျာနီရဲ့ ၁၃၂ နှစ်မြောက် မွေးနေ့ကို ကြိုဆို၍ ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် သမိုင်းထဲကလူသားများ သို့မဟုတ် ဘဝထဲကလူသားများ သို့မဟုတ် ပါရီမြို့ကို ဖြတ်သန်းသွားသူများ အမှတ်တရကဏ္ဍထဲမှာ မှတ်တမ်းတင်ရင်း ရေးသားလိုက်ရပါတယ်။
Articles Khin Maung Yin